Minisitry ny fizahan-tany any Jamaika: fananganana mandroso matanjaka - fizahan-tany 2021 sy ankoatra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Minisitry ny fizahan-tany any Jamaika: fananganana mandroso matanjaka - fizahan-tany 2021 sy ankoatra
Fizahan-tany any Jamaika 2021 sy Beyond
Ny minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, nanao famelabelaran-kevitra nandritra ny adihevitra momba ny sehatra 2021-2022 momba ity lohahevitra ity: Building Forward Stronger: fizahan-tany 2021 sy Beyond.
Ny famelabelaran-kevitry ny Minisitra dia nifantoka indrindra tamin'ny teknika fanavaozana hanarenana ny fizahan-tany, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny COVID-19.
Ny tranga ofisialy voalohany momba ny virus COVID-19 dia tamin'ny fiandohan'ny volana desambra 2019 izay nahatonga ny onja voalohany nisy fiatraikany teo amin'ny toekarena manerantany.
Manerantany, ny fivezivezena sy ny fizahan-tany dia nihena fatiantoka efa ho $ 4.5 trillion tamin'ny 2020.
Vakio ny fampisehoana nataon'ny minisitry ny fizahantany Hon. Edmund Bartlett ao amin'ny fizahan-tany any Jamaika 2021 sy Beyond amin'ny ankapobeny.
Fampidirana sy fankasitrahana
Ramatoa Mpampiresaka, nanetry tena aho fa nahazo tombontsoa hanompo ny olom-pirenen'ny firenena malalantsika mandritra ny herintaona. Mientanentana aho noho ny firotsahan'ny fanohanan'ny mpikambana avy amin'ny andaniny sy ankilan'ity trano hajaina ity, satria miara-miasa izahay hamindra ny olontsika amin'ny fahantrana ho amin'ny fanambinana mandritra ny taona sarotra tokoa ho an'i Jamaika sy izao tontolo izao.
Ny famelabelarako, amin'ity 32 itynd ny fotoana niresahana an'ity trano hajaina ity dia hifantoka indrindra amin'ny dingana efa nataontsika, amin'ny fampiasana teknika vaovao, hanarenana ny orinasanay, izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny valanaretina COVID-19.
Ramatoa Mpampiresaka, tombontsoa lehibe ny voafidy ho solontenan'ny vahoaka ary nomena io andraikitra lehibe io amin'ny fananganana mandroso matanjaka, ny indostrian'ny vaovaom-pirenena - fizahantany. Izaho, noho izany, dia manomboka amin'ny fisaorana an'Andriamanitra noho ny nitahiany ahy tamin'ny fahasalamana sy ny hery hanomezana ny fitarihana ilaina amin'ny fanatanterahana izany andraikitra izany amin'ny fahombiazana lehibe.
Page 1 ny 11 Prev Manaraka